रंग कपाल सुनको गोरो: सिफारिसहरू विशेषताहरू
बाल को स्पष्टीकरण - एक laborious प्रक्रिया धैर्य र समय चाहिन्छ भनेर। नियम, उज्ज्वल मा गाढा रंग देखि एक कार्डिनल संक्रमण कपाल को रंग एक अप्रिय पहेंलो "चल्ला" रंग हुन्छ। पहेंलो मद्दत colorants सुनको गोरा रंग जोगिन। केश कसरी रंग? सिद्ध tsvetotipu उपस्थिति छ कि एक रंग रंग कसरी चयन गर्ने? सुनको गोरो staining सुविधाहरू तल दिइएको।
छविको कट्टरपंथी परिवर्तन: श्यामला देखि गोरा गर्न
सुनको गोरो गर्न रङ लगाउन अघि प्राकृतिक कालो कपाल एक चिल्लो र सुन्दर रंग लागि केही रंग स्पष्ट। को विरंजन रासायनिक कपाल कालो, चकलेट र अन्य गाढा रंग मा रंग संग चित्रित थिए शीघ्र अघि भने, तिनीहरूले पूर्व-उपचार विशेष समाधान हुनुहुन्छ - धुने। प्रक्रिया एक भनिन्छ कपाल नुनीन बनान।
यो Stripper वा discoloration र राम्रो staining बीच केही दिन को एक ब्रेक (3 2) रोक्नु भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। यो समय अवधिमा, विशेषज्ञहरु उपचार रसायन पछि बाल पुनर्निर्माण गर्न सल्लाह। यो तिनीहरूलाई गोरो मा staining द्वारा अनावश्यक क्षति जोगिन मदत गर्नेछ।
जब यो उज्ज्वल रंग मा बाल repaint छैन आवश्यक छ?
मेंहदी वा Basma को लामो समयसम्म प्रयोग पछि विरंजन बाल सिफारिस गरिएको छैन। तपाईं दैनिक तेल मास्क गर्न आवश्यक छ। यो पानी र सिरका (9%) संग बाल धुन आवश्यक पनि छ। ब्लीच रंग प्रयोग मेंहदी अन्तिम प्रयोग (Basma) पछि 3-6 महिना पछि मात्र सम्भव छ। तपाईं खातामा डाटा को nuances लिन भने, खैरो कपाल मा staining पछि हरियो वा नीलो-हरियो रंग खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
जो उपस्थिति tsvetotipu उपयुक्त प्रकाश सुनको गोरो?
उज्ज्वल सुनको टन बालिका र महिला वसन्त र शरद ऋतु tsvetotip स्वामित्वको लागि उपयुक्त छन्। कि, उज्यालो सुनको रंग advantageously संग संयुक्त छ:
हल्का हरियो आँखा र pinkish पातलो छाला;
नीलो, खैरो, हल्का खैरो हरियो आँखा र आरु छाला।
केटी-केटी-जाडो र गर्मी, सफेद संगमरमर र छाला भएको सुनको टन चित्रित गर्न सिफारिस गरिएको छैन। तिनीहरूले थप उपयुक्त प्लेटिनम र खरानी रंग हो।
प्रकाश सुनको गोरो छैन छाला, हल्का eyebrows र परेलाहरु को अनियमितताहरु को मालिकहरूलाई रंग परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो हल्का छाया अनुहार muffled, बेहोश बनाउन र सबै बेफाइदा जोड हुनेछ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
तामा-सुन गोरा को एक स्पर्श के tsvetotip उपस्थिति संयुक्त?
, सुनको गोरा को गाढा रंग प्राकृतिक नजिक, महिला र बालिका लागि उपयुक्त tsvetotipa उपस्थिति गिरावट। तामा र मह गोरो एक सुन रङ्ग संग swarthy छाला र बेज जोड। खैरो हरियो र हल्का खैरो आँखा को गहिराई, रंग रातो overtones संग "सुनको गोरो" चयन गर्नुहोस्।
कालो आँखा र कालो छाला संग महिलाहरु को सुनको tints संग गाढा गोरो मा repainted सिफारिस गरिएको छैन। उहाँले मात्र होइन शैली को व्यक्तित्व, जोड छैन, तर पछि खैरो कपाल धेरै कालो छाला संग मिश्रण छैन पनि, एक विग प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्।
केश कहाँ राम्रो रंग: यो सैलुन वा घरमा?
तीव्र रंग "स्वर्ण गोरा" आत्म-रंग मा हासिल गर्न गाह्रो छ। मात्र Colorist रंग को सही संयोजन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। को सैलून गएर अर्को फाइदा: कपाल डाई प्रयोग व्यावसायिक रंग हानिकारक रसायन को एक न्यूनतम समावेश।
घर मा, एक चिल्लो र सुन्दर सुनको गोरो, प्राकृतिक रंग नजिक, एक सक्छन्, उच्च गुणस्तरीय रंग एजेन्ट प्रयोग प्राप्त।
रंग को विकल्प को लागि सिफारिसहरू
ज्वारभाटा बिना उज्ज्वल पहेंलो रंग प्राप्त गर्न, सुनको गोरो मा painting लागि सही उपकरण चयन गर्नुपर्छ। रंग मात्र छैन कोमल, तर पनि leaching गर्न प्रतिरोधी हुनुपर्छ। कालो कपाल हल्का गर्न सम्भव छैन कोमल bezammiachnoy रंग प्रयोग गर्न छ। किनभने प्रारम्भिक स्पष्टीकरण शक्तिशाली colorant संरचना प्रयोग संग रंगाई अघि बाहिर छ।
रंग "सुनको गोरो" को लागि संख्या को अन्त गर्न3देखि रंग खरिद गर्न आवश्यक छ। यो आंकडा अर्थ सम्पत्ति अतिरिक्त छाया कि - सुन। यसबाहेक, यो मुख्य रंग रंग को आधा बारे छ।
सुनको sheen एक गोरो रंग मा बाल अलग: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
बाल विरंजन पारंपरिक staining प्रक्रिया कुनै फरक छ। निम्नानुसार अल्गोरिदम छ:
रंग अघि बाल कम्तिमा 1 दिन लागि धोए गर्नुपर्छ। हात मा पन्जा, खोपडी चिल्लो बोसो क्रीम मा बाल विकास लगाउन।
पूर्व-स्पष्ट कपाल (केही अघि रंगाई दिन) मा, तयार रंग लागू हुन्छ। एजेन्ट एक ब्रश वा फोम स्पन्जले संग लागू गरियो।
40 मिनेट रंग सामना गर्न एक फिलिम मा बाल र्याप।
राम्ररी लागि र टनिक ख्याल गर्न लागू किसिमहरु कुल्ला।
पछि staining हेयर ड्रायर र 1-2 सप्ताह को इस्त्री को किसिमहरु, तिनीहरूले यस समय सबैभन्दा क्षति झुकाउ मा राख्नु गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
स्टाइलिस्ट प्राकृतिक तेल, दही, फलफूल र तरकारी, साथै हर्बल concoctions आधारित मास्क प्रस्ट्याउने पछि लागू गर्न सल्लाह छन्। भिटामिन र खनिज, प्रोटिन र अन्य पोषक बाल पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न र तिनीहरूलाई राम्ररी groomed र स्वस्थ आकर्षक उपस्थिति दिन।
चरण निर्देश द्वारा चरण: चुल्ठो मा रिबन कसरी बुनाई गर्न
प्रसब पछि जीवन: को नर्सिङ आमाको आहार खाना
"Maynkraft" मा रूपमा एक स्याउ निशान सुझाव बनाउन